နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ယိမ်းယိုင်လာတဲ့ GPS စနစ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:16 PM
PAUK May 21, 2009 at 12:18 AM
khin oo may May 21, 2009 at 12:31 AM
khin oo may May 21, 2009 at 12:32 AM
khin oo may May 21, 2009 at 12:34 AM
သုံးခါတော့ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ ရေးတေးတေးဘဲ။။ မိုးချိူသင်းကို မျှော်မှဘဲ။ အခြေအနေ........တီးခေါက်ကြည့်ရမယ်။
Ko Boyz May 21, 2009 at 12:36 AM
မလှထုံ ဒီမလာတာ တော်တော်ကြာပြီ။
အန်တီ သွားခေါ်မှ သူမျက်စိလည် လမ်းမှားရောက်လာခဲ့တယ်။
Bino May 21, 2009 at 2:37 AM
I understand clearly coz of my nature of my job.
We used GPS(Global Positioning System) in variously.
By using ARPA (Automatic Radar Plotting Aids)
ECDIS=Electronic Chart Display and Information System
AIS=Automatic Identification System
VDR=Voyage Data Recorder
EPIRB=Emergency Position Indicating Radio Beacon
GMDSS=Global Maritime Distress and Safety System
IMMARSAT A,B,C and M including
Last 10 years, Many Shipping Companies alerted their fleet ship due to 2000 Y2K problem.
Last year also my company warning to fleet vessel make sure to check GPS that Maker name, Serial No, Year in built and proper record.
If something was wrong, immediately report back to head office.
Recently is going OK.
အိုက်ခီလောက် May 21, 2009 at 2:43 AM
ပီအိုက် သတင်းတွေ ကဆားချက်လား
mae May 21, 2009 at 3:07 PM
လာကြည့်တာ သုံးခေါက်ရှိပြီ၊ ဖတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် အာရုံသွင်းလို့ မရလို့၊ အတိုချုပ်ကို စာတစ်ကြောင်းနဲ့ ရေးပေးပါလား ကိုဘ?
TomTom ဝယ်ရမလား စဉ်းစားနေတာ... ဒီမှာတော့ ကားမောင်းတာရော လမ်းလျှောက်တာရော အရန်းအသုံးဝင်တယ်
Ko Boyz May 21, 2009 at 3:39 PM
*ကိုဘီနို* - ဗဟုသုတ မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
*အိုက်ခီလောက်* - ရေထိုးပေမယ့် ကိုယ်တိုင် သွားခပ်လာတာဗျ...။ မနည်း ဘာသာပြန်ရတယ်။ :D
*Mae* - Garmin ၀ယ်ပါ။ ပိုပြီးတော့ Reliable ဖြစ်တယ်။ Tom Tom ကတော့ စမ်းမသုံးဖြစ်တော့ မသိဘူး။ Garmin ကို ဖုန်းထဲ ထည့်ပြီး စမ်းဖူးတာ မဆိုးဘူး။ ၀ယ်မယ်ဆို ဆင်းမ်လင်းမ်မှာ အစားအစား ရှိတယ်။ ကားမှာ တပ်တာ ရှိသလို ပါစင်နယ် လမ်းလျှောက် ဂျော့ဂင်းအတွက်လဲ သတ်သတ်ရှိတယ်။ အတိုချုပ်ရေးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲလို့ စဉ်းစားရဦးမယ်။
ksanchaung May 21, 2009 at 11:15 PM
ဒီလို လေထဲက စစ်စတမ်တွေနဲ့ပက်သက်လို့ (အမေရိကနဲ့ ဥရောပယှဉ်ရင်) ဥရောပက အမြဲပိုသာတတ်တဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဂျီအက်စ်အမ်နဲ့ စီဒီအမ်အေပဲ ကြည့်လေ။
ကိုယ်ကတော့ သိပ်တိကျတဲ့ စစ်စတမ်တွေကို လတ်တလော အလိုမရှိဘူး။ ကိုယ်ဘယ်ရောက်နေလဲ ကိုယ့်မိန်းမက ခြေရာခံဖို့ သိပ်လွယ်သွားရင် ရှော့တ်ရှိတယ်။ (ငှဲငှဲငှဲ)။ အခု ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းလေးတောင် အေရိယာ ပြင်ပရောက်သထက်ရောက်အောင် ဒန်အိုးနဲ့ အုပ်ထားရတာကွ။ သဘောပေါက်တယ်နော်။
Ko Boyz May 26, 2009 at 11:04 AM
ခင်မင်လို့ နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခု ပေးပါရစေ။
ဂျီအက်စ်အမ်ဖြစ်ဖြစ် ဆဲလ်လူလာ ဖြစ်ဖြစ် ဧရိယာ ပြင်ပကို ရောက်စေချင်ရင် ဖုန်းကို ပါဝါ မပိတ်ပဲ ဘက်ထရီကို ဒီအတိုင်း ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ခေါ်တဲ့သူက ဧရိယာ ပြင်ပ ဆိုတာကို ကြားနေရပါလိမ့်မယ်။ အဲ.. တစ်နာရီခြား တစ်ခါလောက်တော့ ဘက်ထရီကို ပြန်တပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ နို့မို့ဆို တစ်နာရီ ကျော်သွားရင်း စက်ပိတ်ထားပါသဖြင့် ခေါ်ဆို မရနိုင်ပါဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ ပေးပါလိမ့်မယ်။ အိမ်သူသက်ထားက ဗိုက်ခေါက်လိမ်တာ ခံပါလိမ့်မယ်။
တစ်နာရီခြား တစ်ခါ ပြန်တပ်၊ ဖုန်းကို ပါဝါ ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ ဘက်ထရီကို ပြန်ဖြုတ်လိုက်နော်။
Disclaimer : Use at your own risk. The Blogger does not responsible for any misleading, mistake, problems, trouble caused by practicing the above notes.